Kidnapping-Anjozorobe : tsy mbola votsotra ilay takalon’aina - ewa.mg
Kidnapping-Anjozorobe : tsy mbola votsotra ilay takalon’aina
News - Kidnapping-Anjozorobe : tsy mbola votsotra ilay takalon’aina
Hatramin’ny ora nanoratanay farany,
tsy mbola nandrenesam-baovao ny momba ilay ankizilahikely 12 taona
nataon’ny jiolahy takalon’aina tao Bemahia, fokontany
Ambohi­matsimarofotsy, kaominina Marotsipoy, distrikan’Anjo­zorobe,
herinandro vitsy lasa izay. Tsy manana ilay vola mitentina 60
tapitrisa Ar takin’ireo mpaka an-keriny ny fianakavian’ilay natao
taka­lon’aina. Taorian’izay, tsy azo antso intsony ireo jiolahy,
raha ny fanadihadiana. Hatra­min’izao, mbola manohy ny fitadiavana
ilay ankizilahikely io ny Zandarimarian’An­jozorobe, mitohy ihany
koa ny fikarohana ireo olon-dratsy.
Tsiahivina fa nanapoaka ireo basim-borona nentiny ireo jiolahy
miisa efatra nandritra ny fanafihany tao Be­mahia ny harivan’ny 30
jona lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora. Tsy nisy nisaron-tava ireo
jiolahy, saingy nanao fanamiana miaramila mihitsy niaraka amin’ny
basim-borona roa. Niditra amboletra tao amin’ireo tompon-trano ireo
olon-dratsy sady nanapoaka basy. Tsy nisy sahy nihetsika ireo
tompon-trano sady nanaraka ny ny baikon’ireo olon-dratsy. Mbola
nanapoaka basy indray anefa ireo jiolahy rehefa nivoaka ny tanàna
nentina nampitahorana ny fokonolona ao an-toerana. Andrasana ny
L’article Kidnapping-Anjozorobe : tsy mbola votsotra ilay takalon’aina a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 10/07/2021
Fandaminana entin’ny CUA: misy nafindra na nofoanana ireo toeram-piantsonan’ny « taxi-be »
Nisy ny famindrana toeram-piantsonan’ny taxi sa­san­tsaany ho fandrindrana ny fifamoivoizana eto an-dReni­vo­hitra, notapahin’ny kaominina Antananarivo Re­nivo­hitra. Ho an’ny taxi-be zotra H, avy any amin’ny St Antoine Ambodivona hianavaratra, foana ny fiantsonana eo Ambo­ditsiry sy Analama­hitsy Tanàna manoloana ny tsena. Foana ho an’ny zotra H avy any Sabotsy ny fiantsonana manoloana ny tranombarotra Supermaki Analama­hitsy Tanàna sy eo Ambodi­tsiry. Foana ihany koa ny fiantsonana manoloana ny tsena Analamahitsy Tanàna ary mi­findra eo anoloan’ny Ifas Ana­la­mahitsy izany. Marihi­na fa natokana ho an’ny zotra an-dRenivohitra irery ihany eo. Tsy misy kosa ny fiovana ny fiantsonana ho an’ireo fiara avy any Nanisa­na fa mi­janona ho eo anoloan’ny Per­cepteur ihany. Ny kaoperativa Cotral 017 sy 129, ny Fimpa 164, ny Fim­pama 182, ny Ko­fianta 180, Alpha196 ihany no mampiasa ny fiantsonana eo Ambanidia ampitan’ny Poste. Ny kaoperativa Minex 127, ny Miray 128, ny Mio­ri­na 154, ny CTE 153, ny Ko­fimi 184, ny Fifia­ma135, eo amin’ny tsena no mian­tsona farany ary PMU Anko­raho­tra avy hatrany rehefa avy eo. Toy izany koa ny kaoperativa Volavita 015, ny Tre­ma116, ny Ezaka 117, ny Ko­matra 122, ny Toky 139, ny Somaphar 187, ny Onja 192, ny Mirindra 194 izay miantsona eo Amba­to­roka ICM ary PMU Ankora­hotra avy hatrany avy eo. Marihina fa natao hampidinana sy handraisana mpandeha fotsiny ihany ireo toerana ireo fa tsy natao hiandrasana olona.Tatiana AL’article Fandaminana entin’ny CUA: misy nafindra na nofoanana ireo toeram-piantsonan’ny « taxi-be » a été récupéré chez Newsmada.
Pont de Tanjombato : Coupure partielle pour travaux de réhabilitation
Le Pont métallique de Tanjombato est aujourd’hui en cours de réhabilitation. Des trous, des traces de fissures et de la rouille marquent l’usure du pont métallique de Tanjombato. Suite aux travaux de réhabilitation de cette infrastructure, annoncés par la DRATP (Direction régionale de l’Aménagement et des Travaux Publics) Analamanga, le pont métallique est coupé à partir de ce jour, à 5h du matin, jusqu’au 19 novembre. D’après les explications, les automobilistes peuvent emprunter le pont en béton, qui est donc en double sens, durant les trois jours de coupure. « Une organisation est déjà prévue et mise en œuvre par les forces de l’ordre, avec la Commune de Tanjombato. Les usagers sont invités à bien les respecter, pour que la circulation se passe bien, malgré ces travaux. Pour les grands véhicules et les poids lourds, le mieux est de passer par le By-pass », a communiqué le DRATP Analamanga. A noter que ce pont de Tanjombato compte quotidiennement des milliers d’usagers. Il est de mise que cette infrastructure, sur la route nationale 7, fait l’objet de travaux de réhabilitation, dans le cadre des actions du Gouvernement visant à améliorer le réseau routier dans tout le pays. Antsa R. L’article Pont de Tanjombato : Coupure partielle pour travaux de réhabilitation est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Pont de Tanjombato : Coupure partielle pour travaux de réhabilitation a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fanatsarana ny asa fanaovan-gazety: miatrika fiofanana ireo mpikirakira ny vaovaon’ny kolontsaina
Mba hananana ny toerany ny kolontsaina ao anaty fampahalalam-baovao. Izay no tanjona amin’ny fampiofanana ireo mpanao gazety mikirakira ny vaovaon’ny kolontsaina, ao anatin’ilay tetikasa « Passeport journalisme culturel ». Tetikasa izay novolavolain’ny Centre de perfectionnement des journalistes de Madagascar, araka ny fangatahan’ny Gepimm izy ity, ary tohanan’ny Fondation Filatex sy ny tanànan’Antananarivo. Nanomboka ny alatsinainy teo ny fiofanana , izay hisandrahaka amina sehatra maro ao anatin’ny asa fanaovan-gazety sy ny fikirakirana ny vaovaon’ny kolontsaina. Ho betsaka kokoa ny fifanakalozana traikefa amin’ireo mpanao gazety ela nihetezana vahiny sy malagasy, arahina fampiharana amin’ny fitrandraham-baovao sy ny famoahana izany. « Mbola ny vaovaon’ny politika, ny toekarena, ny tranga ary ny sosialy aloha no homen’ny fanoratana lanja ao anaty vaovao. Faralahiny foana ny kolontsaina, araka izany. Mila mandresy lahatra ny mpanao gazety mikirakira ny vaovaon’ny kolontsaina. Mila maharesy lahatra koa anefa ny vokatra atolony ka izay no iarahantsika mitrandraka mandritra ny fiofanana », hoy ny nambaran’i Loïc Hervouet, iray amin’ireo mpampiofana vahiny. Izy ihany koa no nisantatra ny fampiofanana, tamin’ny fampidirana ny mahakasika ny kolontsaina amin’ny ankapobeny sy ny fahalalana tokony hananan’ny mpanao gazety hiandraikitra izany. Haharitra sivy volana eo ho eo ny fiofanana ka arakaraka ny fisehon’ny hetsika ara-kolontsaina ny fandaharam-potoana. Marihina fa mpanao gazety ampolony, avy amin’ny gazety an-tsoratra, radio ary fahitalavitra, manana fironana amin’ny vaovaon’ny kolontsaina no miatrika ny fiofanana.Zo ny AinaL’article Fanatsarana ny asa fanaovan-gazety: miatrika fiofanana ireo mpikirakira ny vaovaon’ny kolontsaina a été récupéré chez Newsmada.
Ratozamanana Harinjaka: voafidy ho “champion numérique” aty Afrika
Ratozamanana Harinjaka, 43 taona. Izy ny Malagasy anisan’ny voafidy ho mahiratra amin’ireo 50 mitondra fanavaozana aty Afrika eo amin’ny sehatry ny teknolojia nomerika. Namoaka ny anarany ny “Digital Foundation Africa”, tamin’ity herinandro ity tany Ghana ka nahazoany mari-pankasitrahana “champion numérique” aty Afrika, noho ny filofosany nandritra ny 10 taona ao amin’ny “Habaka Madagascar Innovation hub”« Voninahitra lehibe ho ahy izao nanendrena ahy izao, ho fankasitrahana ny zava-bitako nandritra ny folo taona. Tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana akory aho fa ireo namako afrikanina no nanolotra ny anarako, avy eo aho nantsoin’ny Linkedin. Efa voasokajy tany Etazonia sy Eoropa aho teo aloha, fa izao eo anivon’i Afrika ka faly tanteraka aho », hoy Ratozamanana Harinjaka.Tamin’ny 2011 ny lehilahy no nanangana ny « Habaka » teo Tsimbazaza niaraka tamin’ireo namany liana amin’ny teknolojia nomerika. Betsaka ny hevitra nipoitra mamaly ny olana eto Madagasikara. « Tanjonay ny mamorona tetikasa azo apetraka amin’ny fotoana rehetra. Ohatra, ny vahaolana nomerika ho an’ny fambolena na asa fanaovan-gazety aty Afrika. Nampianatra tanora 7 hatramin’ny 17 taona koa izahay, teto Antananarivo, Fianarantsoa, ary Toamasina, nahazoana famatsiam-bola tamin’ny Facebook », hoy ihany Ratozamanana Harinjaka. Naharesy lahatra ireo mpamatsy vola ireo tetikasa samy hafa.Mbola tratra aoriana isika …Lehibe ataon’ny Habaka, ankehitriny, ny manonta boky momba ny nomerika eto Madagasikara sy momba ireo mpandraharaha nifanerasera tamin-dRatozamanana Harinjaka. Araka ny nambarany, mbola tratra aoriana isika eo amin’ny tontolon’ny « digital », koa ampirisihina hatrany ny tanora hitandro ny voninahi-pirenena, hiasa ho an’ny tanindrazana. Ilaina ny fahavononan’ny fanjakana aorian’izao covid-19, hametraka ny e-gouvernance sy ny fotodrafitrasa mahasarika tanora. R.MathieuL’article Ratozamanana Harinjaka: voafidy ho “champion numérique” aty Afrika a été récupéré chez Newsmada.
“Magnus Carslen Chess Tour” : Nifaninana ireo mpilalao mendrika maneran-tany
Taranja isan’ny misy “tournoi” matetika amin’izao fihibohana izao ny Jeu d’Echecs, noho izy afaka lalaovina amin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera. Nisy, araka izany, ny “Tournoi D’échecs rapides” karakarain’i Magnus Carslen, mpilalao laharana voalohany maneran-tany, nampitondrainy ny anarana hoe “Magnus Carslen Chess Tour”. Ireo mpilalao mendrika maneran-tany no nasainy tamin’izany ka loka mitentina 1 tapitrisa dolara no nozainy. Ity mpilalao laharana voalohany maneran-tany ity no mamatsy ara-bola ity fifaninanana ity amin’ny maha mpikarakara azy. Raha hiverenana ny lalao izay nifarana ny alakamisy lasa teo, i Magnus Carslen, ilay mpilalao mendrika indrindra maneran-tany no nivoaka mpandresy. Tsiahivina, nahitana andiany 6 ity fifaninanana Jeu D’échecs nampitain-davitra ity. Marihana fa lalao hatao “en ligne” avokoa ny misy amin’izao noho nytoe-draharaha ara-pahasalamana maneran-tany, efa nanomboka ny volana aprily lasa teo.Mi.RazL’article “Magnus Carslen Chess Tour” : Nifaninana ireo mpilalao mendrika maneran-tany a été récupéré chez Newsmada.
Maroantsetra: tovolahy hita faty voatsatoka antsy teo amin’ny lohany
Nitrangana vonoan’olona mahatsiravina tao amin’ny fokontany Ankiakandrefana, Maroantsetra an-tampon-tanàna, ny faran’ny herinandro teo. Tovolahy iray vao 24 taona hita faty voatsatoka antsy tao amin’ny trano fidiovana. Araka ny fanazavan’ny ray aman-dreniny, nanomboka ny asabotsy 11 jolay izy no tsy tonga nisakafo tao amin’izy ireointsony. Matory ihany ny nataony ao Ankiakandrefana fa ao amin’ny fokontany Ambohitsara izy no tena mipetraka fa nisy fianakaviana niangavy azy hiandry trano tamin’io fotoana io ka antony nahatonga azy tao amin’ny fokontany Ankiakandrefana. Nambaran’ireto ray aman-dreniny hatrany fa niaraka tamin’ny sipany izy nandritra ny fotoana niandrasany trano. Tonga ny alahady antoandro, tsy nipoitra nisakafo tany Ambohitsara ilay niharam-boina. Gaga ihany ireto ray aman-dreniny manoloana izany ka nanapa-kevitra nijery azy tany amin’ilay trano nandrasany. Akory anefa ny hataraina raha nahita ny fatin’ilay tovolahy tao amin’ny trano fidiovana sady feno dian’antsy. Dian’antsy miisa dimy ny hita taminy nanomboka teo amin’ny lohany hatrany amin’ny vozony. Ny sipan’ilay tovolahy no niantefan’ny ahiahian’ny rain’ilay tovolahy. Nambaran’ity rainy hatrany fa nisy disadisa teo amin’ilay zanany lahy sy ity sipany. Tsy hita popoka ny nanjavonan’ilay tovovavy nanomboka tamin’ny alahady nahitana ny fatin’ity sakaizany ity. Mandeha ny fikarohana ilay tovovavy ahina ho tompon’antoka amin’ity fahafatesana ity.Sajo sy Jean ClaudeL’article Maroantsetra: tovolahy hita faty voatsatoka antsy teo amin’ny lohany a été récupéré chez Newsmada.
MINISITERAN’NY MPONINA: Notsinjovina manokana ireo fianakaviana sahirana
Hetsika maro no tanterahin’ny ministeran’ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy mandritra ity volana mey ity izay natokan’ny fitondram-panjakana ho volan’ny fiahiana ara-tsosialy. Fianakaviana sahirana sy marefo miisa 200 avy ao amin’ny boriborintany voalohany indray no nozaraina vary maimaim-poana ny 15 mey 2019 teny amin’ny fokontany Avara-tetezan’ny Bekiraro Isotry. “Miara-dalana amin’ny fiahiana ara-tsosialy ny fiahiana ny fianakaviana ka izany indrindra no antony nanaovana izao hetsika izao amin’ity androany ity satria andro iraisam-pirenena ho an’ny fianakaviana ny 15 mey”, hoy ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, dokotera Baraka Charlotte Hanta. Fokontany folo tao amin’ny boriborintany voalohany no nahazo tombontsoa tamin’izany ka vary dimy kilao isam-pianakaviana no nozaraina, araka ny fanampim-panazavana nomen’ny lehiben’ny fokontany Avara-tetezan’ny Bekiraro Isotry, Ravonjiarison Yvonne. Nosafidiana manokana ireo fianakaviana sahirana sy marefo tamin’ity fizarana vary ity mba ho fitsinjovana ny andavandranom-piainan’izy ireo. Ao anatin’ny politika ankapobeny ny fanjakana ny fiahiana ara-tsosialy ka anisan’ny nanampy tamin’ny fanatontosana ny hetsika ny eo anivon’ny fiadidian’ny repoblika misahana ny raharaha ara-tsosialy sy politika (DASF). Nohamafisin’ny Sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny mponina fa manana zo hilamina ny fiankaviana ka tsy tokony hisy ny herisetra ary mendrika fandrosoana ny ankohonana tsirairay. Lynda A. Cet article MINISITERAN’NY MPONINA: Notsinjovina manokana ireo fianakaviana sahirana est apparu en premier sur déliremadagascar.